English Grammar Online »Hodges University - Fandraisana
Sokajy: Grammar anglisy, Fiteny anglisy, Hodges Connect, Torolàlana an-tserasera, Fampianarana sy fiofanana matihanina
Miroborobo amin'ny alàlan'ny fampianarana an-tserasera ny fitsipi-pitenenana anglisy avy amin'ny Hodges Connect!
Tongasoa eto amin'ny Hodges University's Online English Grammar Program, rafitra manaraka ny fahatakarana ny fitsipi-pitenenana anglisy avy amin'ny fototra ka hatramin'ny ambaratonga avo lenta. Ny fandaharanay amin'ny Internet dia namboarina manokana ho an'ireo olon-dehibe tsy miteny anglisy mba hahatakatra ny fitsipi-pitenenana sy hiteny amin'ny teny Anglisy matoky. Mahazoa ny fahaizana ilainao amin'ny anarana, verbe, clause ary adverba. Ireo fahaiza-manao ireo dia mety hanampy anao hanitatra ny fahaizanao mampiasa anglisy amin'ny fomba mahomby sy fanahy iniana ary / na hampitomboana ny fahafaha-mahazo vola miditra!
Ity fampianarana ity dia natokana ho an'ny olona mila fahaiza-mandanjalanja hianatra an-tserasera, hampiasa smartphone na fitaovana finday, angamba saro-kenatra na saro-kenatra hifampiresaka ao an-dakilasy na eo amin'ny fiaraha-monina, ary / na mila fampianarana anglisy natao hanomezana lesona kalitao anglisy amin'ny Internet amin'ny vidiny mirary. Atombohy anio ny taranja fitsipi-pitenenana anglisy anglisy!
Ity dia fampianarana tsy mitady diplaoma natolotra ho anisan'ny Hodges Mampifandray ny fandaharam-pianarana fanabeazana sy fampiofanana, izay ampifandraisinay amin'ny mpampiasa dia mitaky fahaiza-manao ilainao hahombiazana.
Mikaroha daholo ny taranja fitsipi-pitenenana anglisy
Search Hodges Connect Programs
Fampahalalana momba ny fitsipi-pitenenana anglisy an-tserasera
Manomboha amin'ny fanombohana: Courses amin'ny Internet an-tserasera 1, 2, ary 3
Mahafantatra ny fomba hamantarana sy hampiasana anarana, mpisolo, lahatsoratra, mpamari-toetra, fananana, samy manana ny fironana misy ankehitriny ary ny vanim-potoana taloha of Be. Ianaro ny fomba fampiasana vola, fanaovana fanontaniana ary fifanarahana hanatsarana ny fahatakarana sy ny fahaiza-miteny.
Fanombohana: $ 299
Grammar anglisy 1
Grammar anglisy 2
Grammar anglisy 3
Misoratra anarana ho an'ny teny anglisy vao manomboka
Tohizo amin'ny ambaratonga antonony: Courses amin'ny Internet an-tserasera anglisy 4, 5, & 6
Mahafantatra ny fomba hamantarana sy hampiasana tenda tsotra sy mandroso amin'izao fotoana izao, taloha ary amin'ny ho avy, manao fampitahana sy fangatahana ary mitady ary manome torohevitra sy fahazoan-dàlana. Mianara manambatra fehezan-teny sy mampiasa verba parabola sy endrika mifandraika mba hanatsarana ny fahatakarana sy ny fahaiza-miteny.
Mpanelanelana: $ 299
Grammar anglisy 4
Grammar anglisy 5
Grammar anglisy 6
Misoratra anarana ho an'ny teny anglisy antonony
Farano amin'ny ambaratonga avo lenta: Courses en ligne en ligne en ligne 7, 8, & 9
Mahafantatra ny fomba hamantarana sy hampiasana ny fehezanteny tsotra, tonga lafatra ary mandroso, ny adjektiva sy ny anarana klazy, ny feo miasa sy ny passive ary ny hypothhetical. Ianaro ny fomba hanehoana ny filàna, ny mety, ny azo inoana ary ny fanantenana sy ny faniriana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny sehatra maro samihafa. Ho fanampin'izany, mianatra momba ny gadona sy ny intonation ny kabary anglisy mba hanatsarana ny fahatakarana sy ny fahaizany miteny.
Mandrosoa: $ 299
Grammar anglisy 7
Grammar anglisy 8
Grammar anglisy 9
Misoratra anarana ho an'ny teny anglisy mandroso
Makà fampianarana an-tserasera izay mampianatra anao hampiasa ny teny anglisy amin'ny fiainana tena izy.
Midira amin'ny rehetra 9 taranja mampiasa finday fitaovana.
Ny làlana tsirairay dia misy Fianarana iraisana, fitsapana, fampiharana ny fanononana, ary paikady fampiasana.
Mamerina ny fitsapana tsy voafetra.
Fampianarana ampianarin'i Dr. Leisha Cali, Talen'ny ESL, manana traikefa an-tsaha mihoatra ny 28 taona mampianatra anglisy.
Purchase rehetra ambaratonga anglisy 9 ho an'ny $ 795 na mividy Manomboka, manelanelana ary / na mandroso amin'ny $ 299 avy.
Aza miandry, manomboka anio!
Midira ho an'ny ambaratonga rehetra amin'ny fitsipi-pitenenana anglisy!
Misimisy kokoa momba an'i Dr. Leisha Cali, talen'ny ESL sy Hodges Online Program
Dr. Leisha Cali, talen'ny ESL, dia tao amin'ny University of Hodges nanomboka tamin'ny 2004. 28 taona niainany ary natambatra ny fikarohana sy ny traikefa azo tsapain-tanana namboarina tamin'ny fampianarana ny mpianatra anglisy ho fiteny faharoa nandritra ny 15 taona lasa mba hanomezana paikady fianarana fiteny izany asa izany.
Namolavola ny taranja Grammar amin'ny teny Anglisy an-tserasera manokana ho an'ireo izay mety tsy afaka mitsidika campus manokana.
Ity no azonao antenaina.
Self-dava programa hafa azo alefa amin'ny alàlan'ny Canvas amin'ny alàlan'ny finday rehetra.
Kilasy fitsipi-pitenenana natao hanampiana anao mahatakatra ny dikany ambadiky ny teny voalaza sy voasoratra.
Manampy anao ampitomboy ny fahaizanao mihoatra ny fahavelomana anglisy, izay mety hanakantsakana ny fifandraisana manokana sy ara-tsosialy, ary koa ny fahafaha-manao ara-bola.
Ny fanandramana dia miainga amin'ny safidy maro ka hatramin'ny famenoana ary azo alaina im-betsaka araka izay itiavan'ny mpianatra azy.
Mianara voambolana matetika fa tsy voambolana be dia be, mamela anao hifandray amin'ny fomba mandaitra.
Mianara fomba hamoronana sy fananganana voambolana ao amin'ny horonan-tsary Fampiharana azo ampiharina isaky ny lesona.
Mahazoa bebe kokoa amin'ny volanao amin'ny alalàn'ny fampianarana amin'ny accent, stress, gadona ary feon-kira - faritra matetika atao ambanin-javatra amin'ny programa nentim-paharazana sy an-tserasera.
Raha fintinina dia noforonina ny programa Hodges University Grammar Online an-tserasera mba hahafahanao mahatakatra ny fomba fiasan'ny fitsipi-pitenenana sy hianaranao miteny amin'ny fahatokisana!
Majani Lullein, filoha lefitra Anchorage Productions Media
“Ny programa dia nanampy ahy hifindra amin'ny tontolo miteny anglisy amin'ny fahatokiana sy fampiononana. Raha tsy nisy izany dia tsy ho afaka namita ny fianarako teto amin'ity firenena ity aho. ”